Uganda oo qabatay gaari laga soo buuxiyey qaraxyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 17 September 2014 18 September 2014
Mareeg.com: Wargeyska New Vision ee kasoo baxa dalka Uganda ayaa maanta oo arbaco ah qoray in howlgalkii sabatidii lasoo dhaafay ciidamada Uganda ka bilaabeen xaafadaha magaalada Kampala ee lagu raadinayey unug ka tirsan Alshabaab, waxyaabihii lagu qabtay uu ka mid ahaa gaari laga soo buuxiyey walxaha qarax.
Wargeyska ayaa qoray in howlgalka gaarigaas lagu qabtay oo dhacay sabtidii, balse uu soo shaac baxay shalay oo sabti aheyd.
Wuxuu sheegay New Vision in gaariga la qabtay oo nuuciisu yahay TOYOTA NOAH uu ka diiwaan gashan yahay, islamarkaana wato taargada Koonfurta Sudan oo deris la ah Uganda.
Booliska ayaa sheegay in gaarigaas oo laga soo qabtay xaafadda Mengo-Kisenyi uu qeyb ka haa weerar fashilmay oo Alshabaab ku qaadi rabeen Uganda todobaadkan.
Sabtidii lasoo dhaafay ciidamada Uganda oo u dhacay guryo badan oo ku yaalla xaafadda Mengo- Kisenyi ayaa soo xiray 19 ruux, halka Isniintii ay soo xireen 7 kale. Dadka la xiray badankood ayaa la sheegay iney yihiin Soomaali.
Wargeyska New Vision ayaa sheegay inuu ogaaday in gaariga la qabtay oo laga furay walxaha qarxa uu yaallo saldhig ay leeyihiin ciidamada pooliska ee baaritaanka gaarka ah sameeya (Police Special Investigations Division) “SID” oo ku yaalla deegaanka Kireka, ee degmada Wakiso ee ka tirsan Kampala.
Alshabaab ayaa shalay beeniyey in ciidamada Uganda ay fashilyeen weerar qaraxyo ah oo ay la doonayeen dalka Uganda, waxeyna Alshabaab xuseen in sheegashada Uganda tahay mid lagu qarinayo fadeexadii ka dhalatay kufsiga lagu eedeeyey ciidamada AMISOM.